ब्रोकर कमिसन नतिरी कसरी सेयर खरिद गर्ने ? | NewsKarobar.
गृहपृष्ठ ब्रोकर कमिसन नतिरी कसरी सेयर खरिद गर्ने ?
दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि ब्रोकरले हामीलाई बिल दिन्छ । जति पैसाको सेयर किने पनि बिलमा ब्रोकर कमिसन जोडिएको हुन्छ । जब हामी बिल हेर्छौं, सेयरमा लगाएको पैसाभन्दा पनि ब्रोकरलाई तिरेको कमिसन देखेपछि, एकपटक जिब्रो टोक्छौं । त्यहाँ ब्रोकरलाई तिर्ने कमिसनमात्र नभई धितोपत्र बोर्ड शुल्क, नामसारी शुल्कलगायतका शुल्क जोडिएका हुन्छन् । जसले हाम्रो प्रतिसेयर खरिद लागतलाई ह्वात्तै बढाइदिएको हुन्छ । मूल्यमा भएका सानातिना वृद्धिले नाफा देखिनै गाह्रो पर्छ । सेयर मूल्य बढे पनि घाटै देखिन्छ । नाफा–नोक्सानको कोलम अझै रातै हुन्छ । हरियो हुँदैन ।
यो देख्दा कहिलेकाहिँ लाग्छ– के यी कमिसन नतिरी सेयर किन्न सकिँदैन ? कमिसन नतिर्नुपरे त मूल्य अलिकति बढ्ने बित्तिकै नाफा देखिन्थ्यो । कारोबार पनि धेरै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो सोच मैले जस्तै हरेक सेयर खरिदकर्ताले बिल हेर्दा सोच्ने गरेको हुनुपर्छ ।
जब प्राध्यापकले ‘ब्रोकर कमिसन नतिरी सेयर खरिद’ भन्ने विषय प्रवेशमा कक्षा सुरु गरे यसले मलाई पुरै उनैतिर एकोहोरो बनायो । ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिल्यो’ भन्ने उखानझैं लाग्यो । सुरुमा के यो सम्भव छ र ? जस्तो पनि लाग्यो तर असम्भव भन्ने कुरा संसारमै कमै छन् । केवल हामीकहाँ अभ्यास गर्न नसकिएको मात्र रहेछ ।
संसारका धेरै देशमा लाभांश पुनः लगानी योजना (डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लाभांश पुनः लगानी योजना भनेको कम्पनीले दिएको नगद लाभांश पुनः त्यही कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने हो । अर्थात्, कम्पनीले दिएको नगद लाभांशले त्यही कम्पनीको सेयर किन्ने भन्ने हो । अमेरिका र क्यानडामा यो योजना धेरै सूचीकृत कम्पनीले सञ्चालन गरेका छन् ।
लाभांश पुनः लगानी योजनाको अध्ययनपछि मैले सेयर कारोबार गरिरहेको ब्रोकरलाई फोन गरेँ र लाभांश पुनः लगानी गर्ने मनसाय व्यक्त गरेँ । उक्त ब्रोकर कम्पनी संसारकै ठूलोमध्येमा पर्छ । जुन यहाँको टिडी बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । मेरो व्यक्तिगत विवरण, सेयर कारोबार खाता र अन्य सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न सोधिसकेपछि ती प्रतिनिधिले मलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गरे । मैले लाभांश पुनः लगानी योजनामा सहभागी हुनेबारे बताएँ । त्यसपछि उनले लाभांश पुनः लगानी र सेयर ब्रोकरका योजनाबारे बताउन सुरु गरे ।
लाभांश पुनः लगानी दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । पहिलो सेयर ब्रोकरमार्फत र दोस्रो प्रत्यक्ष रुपमा कम्पनीमार्फत ।
ब्रोकरमार्फत गरिने लाभांश पुनः लगानीका लागि सर्वप्रथम ब्रोकरको प्रणाली वा हाम्रो सेयर कारोबार खातामा यो योजना अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हामीले सेयर किनेका कुनै कम्पनीले दिएको लाभांश हाम्रो खातामा आएपछि उक्त लाभांशले पुग्ने गरी सोही कम्पनीको सेयर ब्रोकरले बजार मूल्यमा खरिद गरिदिन्छ । यो खरिदमा ब्रोकरले कुनै पनि कमिसन या अन्य शुल्क लिँदैन । तर, यसरी सेयर खरिद गर्दा ब्रोकरले पूर्ण सेयरमात्र खरिद गर्छ अर्थात् एक कित्ताभन्दा कम सेयर उसले किन्दैन । लाभांशले एक कित्ता पनि सेयर किन्न नपुग्ने भए अर्को पटक लाभांश आएपछि वा लाभांशले कम्तीमा एक कित्ता सेयर किन्न पुग्ने भएपछि सेयर खरिद गर्छ । यहाँ प्रायः कम्पनीले तीन महिना वा त्रैमासिक रुपमा लाभांश वितरण गर्छन् । कतिपय कम्पनीले हरेक महिना पनि लाभांश वितरण गरिरहेका हुन्छन् । यसको अर्थ महिनैपिच्छे लाभांश आउने कम्पनीको लाभांशले हरेक महिना सेयर खरिद हुँदै जान्छ भने यो महिना किनेको सेयरले अर्को महिना लाभांश प्राप्त गर्छ ।
यस्तै, अर्को विकल्पमा ब्रोकरमार्फत नभई कम्पनीमार्फत सिधै लाभांश पुनः लगानी योजनामा सहभागी हुने भन्ने हो । लाभांश वितरण गर्ने धेरै कम्पनीले यो योजना ल्याएका हुन्छन् । जुन कम्पनीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्छौं । यसमा सहभागी हुनका लागि पहिला हामीसँग सम्बन्धित कम्पनीको कम्तीमा एक कित्ता सेयर हुन आवश्यक छ । उक्त सेयर पनि कम्पनीबाट कुनै शुल्क नतिरी सिधै किन्न सकिन्छ । तर, कतिपय कम्पनीले त्यसका लागि न्यूनतम लगानी जस्तो कि ५ सय डलर लगानी गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको पाइन्छ । यसपछि कम्पनीले उपलब्ध गराएको फारम भरी योजनामा सहभागी हुन सकिन्छ ।
कम्पनीमार्फत सिधै सहभागी हुँदा दुईवटा फाइदा छन् । पहिलो कम्पनीले दिएको लाभांशले पुरै सेयर किन्न नपुगे एक कित्ताभन्दा कम सेयर पनि खरिद गरिदिन्छ । यसले गर्दा जति सेयर आए पनि सेयर बढ्दै जान्छ भने अर्को लाभांश भुक्तानीमा उक्त एकभन्दा कम कित्ता सेयरले पनि लाभांश पाउने हुन्छ । त्यस्तै, अर्को फाइदामा यसरी सिधै कम्पनीमा सहभागी भएर किनिएको सेयरमा प्रायः कम्पनीले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको पनि पाइन्छ । यसको अर्थ, कम्पनीले ५ प्रतिशत छुट दिएमा बजार मूल्यभन्दा ५ प्रतिशत कममा सेयर प्राप्त गर्न सकिने भयो । तर, ब्रोकरमार्फत लाभांश पुन लगानीमा सहभागी हुदा भने यस्तो छुट पाइँदैन । यसरी कम्पनीमार्फत लाभांशको पुनः लगानी गरी सेयर किन्दा पनि कुनै शुल्क लाग्दैन ।
लाभांश पुनः लगानी योजना नयाँ लगानीकर्ताका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । जससँग थोरै पैसा छ तर नियमित लाभांश दिइरहेका कम्पनीको सेयरमा लगानी सुरु गर्न चाहन्छन् भने नियमित र बढ्दो लाभांश बाँडिरहेका कम्पनीको थोरै सेयर खरिद गरेर सहभागी बन्न सकिन्छ । यो योजना दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । लाभांश पुनः लगानी हुँदै जाँदा सेयर संख्या बढ्दै जाने र राम्रो कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर सम्पत्ति पनि बढ्दै जाने पनि हुन सक्छ ।
नेपालमा पनि लाभांश पुनः लगानी योजना सुरु गर्न आवश्यक छ । यसबारेमा कम्पनीले सोच्ने बेला आएको छ भने नियामक निकाले पनि बजारमा नयाँ विकल्प दिनेबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ । यसको सुरुवात खुलामुखि म्युच्युअल फन्डमार्फत गर्न सकिन्छ । एनआइबीएल क्यापिटलले ल्याउन लागेको खुलामुखी म्युचुल फन्डमा एकाइ धनीलाई दिने लाभांशले पुनः त्यही फन्डको एकाइ खरिद गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सकिन्छ ।
सेयरमा आत्मसमर्पण गर्नुहोस्
प्रकाशित समय १०:५५ बजे
पछिल्लाे - एक गाग्री पानीका लागि हप्तामा पालो
अघिल्लाे - वरपीपल, चौतारी र कुवा संरक्षण अभियान